Xaaladda caafimaad gabar sun ku cabtay degmada Guriceel oo laga deyrinayo - Caasimada Online
Home Warar Xaaladda caafimaad gabar sun ku cabtay degmada Guriceel oo laga deyrinayo
Xaaladda caafimaad gabar sun ku cabtay degmada Guriceel oo laga deyrinayo
Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Wararka laga helayo gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in gabar ka mid ah dadka deegaanka ay Sun ku cabtay gudaha degmada Guriceel oo ka tirsan gobolkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in gabadhaasi oo magaceeda lagu sheegay Ifraax la dhigay isbitaalka magaaladaasi, islamarkaana haatan lala tacaalayo xaaladeeda caafimaad.
Lama oga sababta ka dambeysa in ay sun cabto gabadhaasi, balse wararka qaar ayaa sheegaya in dhacdadaasi ay salka ku heyso arrimo la xiriira qoys, gaar ahaan muran u dhexeeya, Ifraax iyo Sayigeeda oo ka diiday inuu furo, kadib markii ay ka dalbatay.
Xaaladda caafimaad ee gabadhaan oo haatan dhaqaatiirtu ay la tacaalayaan ayaa laga deyrinaa, iyadoona ku jirto xaalad aad u adag, sida ay inoo sheegeen ilo deegaanka ah.
Dhowaan ayey aheyd markii dhacdo tan la mid ah laga soo wariyey magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, kadib markii wiil dhalinyaro ahaa oo loo diiday gabar uu jecla uu sun ku cabay gudaah degmadaas, inkastoo uu la aqal galay markii dambe.